Shirkii Gollaha Wasiiradda Federaalka oo Lagu Magacaabay Hanti-dhowr Guud ee Qaranka – Radio
Shirkii Gollaha Wasiiradda Federaalka oo Lagu Magacaabay Hanti-dhowr Guud ee Qaranka
August 5, 2017	390	Like
Shirka khamiislaha ee Golaha Wasiirada ee Xukuumada Federaalka Soomaaliya oo uu shir-guddoominayay Ra’iisal Wasaaraha Xukuumada Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa lagu magaacaabay Hanti-dhowrka guud ee qaranka, waxaana lagu ansixiyay saddex Hindise sharciyeed, Sidoo kale waxaa looga hadlay waxaa ka mid ahaa Amniga, ansixinta Hindise Sharciyeedyo, warbixino la dhageystay iyo magacaabista Hanti Dhowrka Guud ee Qaranka.
1.Hindise Sharciyeedka Biyaha oo dalka u horseedi doono sidii loo nidaamin lahaa helista biyaha, hubinta in biyahu ay nadiif yihiin, shacabkana meel walba oo ay joogaan si fudud lagu gaarsiin karo.
2.Hindise Sharciyeedka Manhajka Waxbarashada oo wadatashi dheer oo lala yeeshay dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada iyo dowlad goboleedyada. Sharcigan ayaa sahlaya mideynta manhajka waxbarashada dalka, hubinta in caruurta la baro duruusta muhiimka u ah muwaadinimadooda isla markaasna u horseedi doona dalka waxbarasho tayo leh oo muwaadin walba uu xaq u leeyahay.
3.Hindise Sharciyeedka Caafimaadka oo muhiim u ah dalka, horseedi doonana in daawooyin tayo leh laga iibiyo shacabka, in takhaatiirta howlgasho la nidaaminayo oo la hubinayo, iyo goobaha caafimaadka oo iyagana la diiwaangelinayo si loo hubiyo inay adeegyo caafimaad oo lagu kalsoonaan karo ay fulinayaan.
January 20, 2019	177	Like
Arsenal ayaa talaabadii ugu dambeysay u qaadeysa soo xerogalinta Thomas Lemar iyadoo isku diyaarineysa iney ...